सुँगुरको मासु बाेकेर अष्ट्रेलिया जाँदा भिषा नै रद्ध ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सुँगुरको मासु बाेकेर अष्ट्रेलिया जाँदा भिषा नै रद्ध !
२८ असोज, सिड्नी। अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आएकी एक भियतनामी महिला विभिन्न जिवजन्तुको मासु र अण्डासहित पक्राउ परेकी छिन् ।
पक्राउ परेकी ४५ वर्षीया महिलाको साथबाट १० किलोग्राम स्क्विड, बट्ट्याईं र साढे ४ किलो सुँगुरको मासु अनि केही अण्डा बरामद गरिएको छ । विना पूर्व जानकारी मासु बोकेर आएको भन्दै उनको भिसा नै रद्द गरिएको अष्ट्रेलियाको सङ्घीय कृषि मन्त्री ब्रिजेट मकेञ्जीले खुलासा गरेकी छिन् ।
अफ्रिकी स्वाइन फिभर फैलिएको भनेर पहिचान गरिएका राष्ट्रबाट अष्ट्रेलिया आउनेहरुलाई विशेष निगरानी गरिएको पत्रकारहरु सँग उनले बताइन् । सुँगुर प्रजातिका पशुलाई सङ्क्रमित गर्ने उक्त रोग अस्ट्रेलियामा हालसम्म नदेखिएको र भविष्यमा पनि नफैलियोस् भन्नका लागि सचेत रहेको उनको भनाई छ ।
“आफूलाई मिठो लाग्ने परिकार र मासुका खाद्यान्न कसैलाई पनि ल्याई दिन नभन्नुहोस्, उनले चेतावनी दिँदै भनेकी छिन्, कृषि क्षेत्रलाई लिएर हामी कुनै पनि खतरा मोल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ त्यसैले नियम भङ्ग गर्नुभयो भने तपाईँ माथि हाम्रो जैविक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन लाग्छ ।”
Previousआफ्नै साथीलाई छुरा हान्ने पक्राउ
Nextभारतीय क्रिकेट बोर्डको अध्यक्ष बन्दा गांगुलीलाई करोडौं घाटा, गर्न पाउँदैनन् यी काम